brushed nickel imwechete inobata pombi yekugezera
musha / Mabheji ekugezera / Imwechete Yakabata Bathroom Faucets / WOWOW 3 Hole 4 Inch Centerset Faucet
Faucet brushed nickel dhizaini dhizaini retro: Fingerprint yemahara, inodzivirira kutu.
Dhiza yakaiswa faini dzenhema Zvinogamuchirwa pamusha, kondomu idzva, imba imwe chete, mota mota, fambi yekufambisa, uye kushandiswa kweimba.
2320700 mirairo yekuisa
brunch nickel yekugezera faucet 2320700 info:
Chengetedza mari uye mvura kwauri: yakavakwa mu1.2mm neoperl aerator, ichipa yakagadzikana yekuwacha kusangana, neinosvika makumi maviri muzana mvura shoma kupfuura zvakajairwa, uchichengetedza mari yako usingakanganisi kushanda kwayo.
Ichena yekushandisa dhayeti musangano inosanganisirwa: kuti bhavhu rekugezesa rakapetwa nickel inosanganisira simbi yekudonha musangano, mvura inouya kubva paneuchenji kunyura kuburikidza nekutsikirira padanda rekusimudza, kudzivirira kuhenda maoko ako akasukwa.
Kudonhedza-isina ceramic capsule: yakavakirwa mucherechedzo yakakwirira yedareti yemadziro, inotenderera zvakanaka kuti ivimbise mvura tembiricha yekudziya yekushandura uye kushandisa kwenguva yakareba pasina kudonha
Chengetedza kushandisa: ese ekugezera tap mapipi anotenderwa nesu, nsf61-9, ab 1953 inotungamira-yemahara bhizinesi muyero. Muviri faucet yakagadzirwa izere-simbi, ine simba uye inogara kwenguva refu.
Yakatemerwa hupenyu waranti: tinopa 3-makore garandi kupesana nekuvuza, kudonha, kuputsika, uye kupedzisa zvikanganiso.
Centerset yokugezera faucet yapfuura iyo ine munyu-pfira bvunzo, zvichireva kuti inopesana nekuora.
Chigadzirwa hachizombofa chakaburitsa zvinetso zvinomira.
Iko hakuna mabhururu, mikwakwa, kana mavara pamhepo.
Electroplated nemhedzisiro, chigadzirwa hachiwanzo kuwana oxidization.
SKU: 2320700 Categories: Mabheji ekugezera, Imwechete Yakabata Bathroom Faucets Tags: Bronze Nickel, Classic, dhureni, lavator
Zingi chiwanikwa / Brass / Stainless simbi
3 hole 4 inch centreset dhizaini
NSF ceramic disc valve, sanganisa mvura, 3-hole 4 mukati. Centeret dhizaini, nyore kuisa, 1 mubato wekudzivirira mvura inopisa uye inotonhora, satin nickel
WOWOW 8 In. Yakapararira 2-Yakabata Bathroom Bathuchu ...